शंकर अर्याल | Ratopati
बुधबार १९ मङ्सिर, २०७५ Tuesday, 25 February, 2020
अनिश्चित बन्यो मौद्रिक नीतिको समीक्षा access_timeफागुन ९, २०७६
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेपकारी भूमिकापछि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा अनिश्चित बनेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको राष्ट्र बैङ्कको समीक्षा प्रभावित गर्नेगरी अर्थ मन्त्रालयले बैङ्करहरुलाई बोलाएपछि समीक्षा अनिश्चित बनेको हो । न...
‘विगतका भूमिका नै प्रमाण छन्, म गभर्नरको उपयुक्त उम्मेदवार हुँ’ access_timeफागुन ५, २०७६
राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल यही चैत ५ गते सकिँदैछ । गभर्नरको कार्यकाल सकिन ठीक एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा आगामी गभर्नर को बन्छ भन्ने चासो सबैतिर छ । नियामक निकायमध्येकै सबैभन्दा शक्तिशाली मानिने यो संस्थाको कार्यकारी प्रमुख बन्न अहिले धेरै आकाङ्...
तीन बैङ्क चम्किँदा वाणिज्य बैङ्कलाई विकास बैङ्कले जित्यो access_timeफागुन ४, २०७६
काठमाडौं । नाफाको वृद्धिमा वाणिज्य बैङ्कहरु भन्दा विकास बैङ्क अगाडि देखिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ती बैङ्कहरुले बढाएको नाफा वाणिज्य बैङ्कको औसत नाफा वृद्धिभन्दा दोब्बर देखिएको हो । यो अवधिमा विकास बैङ्कहरुको औसत नाफा वृद्धि १५.४५ प्रतिशत पुगेको छ जबक...
श्वेतपत्र भर्सेस अर्धवार्षिक समीक्षा : सरकार कहाँ थियो, अहिले कहाँ आइपुग्यो ? access_timeफागुन ४, २०७६
काठमाडौँ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएसँगै २०७४ फागुन १४ गते अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका डा. युवराज खतिवडाले त्यसकोे करिब १ महिनापछि अर्थतन्त्रको समग्र स्थितिको अवस्था सार्वजनिक गर्न भन्दै श्वेतपत्र जारी गरे । त्यो श्वेतपत्रको मुख्य सार देशको अर्थतन्त्र ज्यादै न...
यस्ता छन् क्यान टुक्र्याउने दुई कानुन : प्राधिकरणको ९५ प्रतिशत स्वामित्व गुम्दै access_timeफागुन २, २०७६
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण’ र ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण’ गरी दुईवटा प्राधिकरण गठन गर्नेगरी ल्याएको उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसके पन...
तपाईंले किनेको जग्गा कतै सरकारी त होइन ? access_timeमाघ २८, २०७६
काठमाडौँ । बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गरिएको भन्दै अख्तियारले १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलायो । त्यसमध्ये ६८ जनाको जग्गा जफत गर्न प्रतिवादी बनाइएको छ । बाँकी २ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छैन तर उनीहरुको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याइसकिएको छ । मुद्दा चलाइए...
कस्तो बन्नुपर्छ स्मार्ट सिटी ? access_timeमाघ २६, २०७६
काठमाडौँ । दुई वर्षअघि एकजना बेलायती अनुसन्धानकर्ता जुनिपरले सिंगापुर, बार्सिलोना, लन्डन, सान फ्रान्सिस्को र ओस्लोलाई विश्वका उत्कृष्ट ५ स्मार्टसिटीको रुपमा घोषणा गरे । त्यही समयमा अर्को सर्वेक्षण पनि गरियो जसले विश्वका उत्कृष्ट २५ शहरको सूची सार्वजनिक ग¥यो । त्यसमा न्युय...
बाफिया संशोधनको ३ बुँदामा बैङ्करदेखि विज्ञको असहमति access_timeमाघ २५, २०७६
काठमाडौँ । दर्ता भएको ५ महिनापछि सोमबार आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ४ वटा कानुनले संसदमा औपचारिक प्रवेश पायो । छलफलका लागि विधेयक पेस गर्ने सम्बन्धमा विरोधको सूचना नपरेसँगै यीे विधेयक संसदीय समितिमा छलफलका लागि गएका छन् । संसदमा एकैचोटि प्रस्तुत भएका नेपाल राष्ट्र...
सुस्त बन्दै विश्व अर्थतन्त्र, 'कोरोना'ले यसरी निम्त्याउँदैछ आर्थिक मन्दी access_timeमाघ २२, २०७६
काठमाडौँ । कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै जोखिममा पर्ने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार विश्वकै सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक मुकुकको रूपमा रहेको चीनमा फैलिएको यो सङ्क्रमणले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक रूपमा असर पार्न सुरु भइसकेको छ । यो सङ्क्रमणको प्र...
'ढिला भइसक्यो, अब बजारलाई नै ब्याजदर निर्धारण गर्न दिऔँ ' access_timeमाघ २०, २०७६
अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नर समेत हुन् । उनी देशको आर्थिक तथा मौद्रिक अवस्थाको बारेमा खरो समीक्षा गर्ने व्यक्तिका रूपमा पनि चिनिन्छन् । पछिल्लोे बजेट तथा मौद्रिक नीतिले कार्यान्वयनको पहिलो ...
वायु सेवा निगमले नेतृत्व पायो, कार्यकारी पाएन access_timeमाघ १९, २०७६
काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगममा फेरि संरचना परिवर्तन गरिने भएको छ । तात्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले राजीनामा पछि नयाँ कार्यकारी प्रमुख अध्यक्ष नरहने गरी संरचनागत परिवर्तन गरिएको हो । खरेलको राजीनामा सँगै सरकारले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्...
राष्ट्र बैंकले भन्दैमा रोकिन्छ फेसबुकको विज्ञापन ? access_timeमाघ १८, २०७६
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागले शुक्रबार एउटा सूचना जारी गर्यो । विदेशी विनिमय विभागले जारी गर्ने प्रत्येक सूचना यसकारण महत्त्वपूर्ण मानिन्छ कि यसले जनतालाई प्रत्यक्ष असर गर्छ । हुन त मौद्रिक क्षेत्रका प्रत्येक गतिविधि जनताको दैनिक जीवनसँगै ...
आयात घट्यो, निर्यात बढ्यो : तर सन्तोष मान्ने ठाउँ छैन access_timeमाघ १७, २०७६
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ६ खर्ब ९४ अर्बको आयात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्याँकअनुसार उक्त अवधिमा ४६१३ प्रकारका सामान आयात हुँदा उक्त रकम बराबरका मालवस्तु आयात भएको हो । सो अवधिमा नेपालको कूल निर्यात ५९ अर्ब ६१ करोड रुपैंया निर्यात हुँदा ७२४ प्रक...
स्टक डिलरले सेयरमा डुब्नबाट रोक्छ ? access_timeमाघ १६, २०७६
नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) ले ‘नागरिक स्टक डिलर लिमिटेड’ नामक सहायक कम्पनी स्थापना गर्ने अन्तिम गृहकार्य अघि बढाएको छ । नागरिक लगानी कोषको बहुमत सेयर स्वामित्व रहने र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र नेपाल टेलिकमको समेत लगानी रहनेगरी स्टक डिलरको काम गर्ने...
‘७७ जिल्लामा ८० वटा कार्यालय खोलेर जनगणना गरिनेछ’ access_timeमाघ १२, २०७६
सन् २०२१ को जनगणनाको तयारी अघि बढिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गत मङ्सिदेखि नै पाइलट सर्भे सुरु छ । गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनगणना – २०७८ को प्रशासनिक व्यवस्थापन र आर्थिक मापदण्ड स्वीकृत गरेसँगै जनगणनाको प्रक्रिया अगाडि ...
शेयर बजार : पुरानै बाटोमा फर्किएको हो कि उचाइलाई पर्खिएको ? access_timeमाघ ११, २०७६
काठमाडौं । करिब २० महिनाको रेकर्ड तोड्दै आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से १३ सय ४३ को बिन्दुमा पुग्यो । तर सोमबारदेखि बजार फेरि घट्न थाल्यो । बिहीबारको अन्तिम १२ सय ९७ मा आएर बजार रोकिएकोे छ । नेप्से परिसूचकले सकारात्मक दिशा लिन थालेको पनि धेरै भएको छैन ...
कोरोनाभाइरसको संक्रमणः के हुँदैछ विश्वमा ?
चर्चामा रहेकी ट्रम्पकी छोरी इवाङ्का, जसले विश्वभर यसरी आफ्नै पहिचान बनाएकी छिन्
क्वान्टिटी भन्दा क्वालिटीलाई बढी ध्यान दिन्छु - साम्राज्ञी (भिडियो)
ट्रम्पलाई नयाँ दिल्लीमा स्वागत
‘कोभिड १९ का कारण इरानमा ५० व्यक्तिको मृत्यु हल्लामात्रै’
ट्रम्प र मोदीद्वारा अहमदावादमा ऐतिहासिक सम्बोधनः इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिबारे बोले ट्रम्प
कृषि क्षेत्रलाई औद्योगिकीकरण गर्नुपर्छः मुख्यमन्त्री राउत
एकअर्कालाई नसहने बानीले काँग्रेस पछि परेको हो: महत
नेता खनालको प्रश्न ः ज्ञानेन्द्र कार्कीजीले एमसीसीमा के हेरेर हस्ताक्षर गर्नुभयो ?